Home Ulo oru Europe Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ
Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ. Ebe E Si Nweta ka akwụkwọ akwụkwọ maka akwụkwọ nyocha na Twitter
LB na - ewetara aha otutu “Kpamkpam”Brunelleschi“. Anyị Federico Bernardeschi Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ndụ na ebili nke Federico Bernardeschi. Ebe E Si Nweta Foto: ThePlayersTribune, Akwụkwọ ahụaja na Gianlucadimarzio
Nchịkọta zuru oke na-emetụta ndụ nwata ya, nzụlite ezinụlọ ya, agụmakwụkwọ / ịkọ ọrụ mbụ ya, ndụ ọrụ ya mbụ, ụzọ ama ama, ibilite na ama akụkọ, ndụ mmekọrịta, ndụ nke onwe ya, akụkọ ezinaụlọ ya, ụdị ndụ ya na akụkọ ndị ọzọ na - amaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara ọ bụ otu n'ime atụmanya na nka dị egwu nke knowntali mara maka ọnọdụ ịnọ nso zuru oke na anya maka mgbaru ọsọ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Federico Bernardeschi nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunyere akụkọ eziokwu banyere Biography Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
A mụrụ Federico Bernardeschi na ụbọchị 16 nke February 1994 na nne ya bụ onye Nọọsụ na nna, Alberto Bernardeschi (onye ọrụ ụlọ ọrụ marble) na Carrara, mpaghara nke Tuscany, Italy. N'okpuru ebe a bụ foto mara mma nke oke osimiri nke obere Federico Bernardeschi mgbe ọ bụ nwatakịrị.
Foto na-adịghị ahụkebe nke Federico Bernardeschi mgbe ọ bụ nwatakịrị. Ebe E Si Nweta Foto: ThePlayersTribune
Federico Bernardeschi sitere na Carrara, obodo dị n'etiti etiti whichtali nke ama ama aha ya ama ama na-akpọ; 'Obodo marble'. Ugbu a ajụjụ:… Ihe kpatara Obodo Oké Nkịtị? ... Ọ bụ n'ihi na Carrara bụ ama ama maka nyocha ya nke mabble mara mma mara mma Carrara. Ị maara?… Obodo marble dị ka a hụrụ n’okpuru ebe a bụ ebe omumu na ụlọ nke Onye Nlekọta Italiantali Legendary Gianluigi Buffon.
Ọmarịcha foto nke Carrara (Obodo Marble) ebe Federico Bernardeschi nwere Mmalite nke Ezinaụlọ ya. Obodo Marble. Ebe E Si Nweta Foto: kaporamarbletour na Pinterest na TuscanyPrivateTour.
Otu n'ime nne na nna Federico Bernardeschi- nna ya rụrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ marble n'obodo ahụ n'oge ọ bụ nwata. Dị nnọọ ka ọtụtụ ụmụaka nwere nne na nna nwere ohere, Federico nwere ike ịhụ nna ya kwa mgbede ka Alberto ga-arụ ọrụ ọtụtụ awa, na-ebili site n'ihe ndina site na 5 am, na-ahapụ ụlọ tupu 6 am wee na-alaghachi n'ụlọ na 6 pm N'ihi ya, Federico na-etinye nne na mama ya na obere nwanne ya, Gaia.
Njikọ Njikọ Njikọ bọọlụ: Mgbe Federico Bernardeschi dị afọ atọ, papa ya kpọgara ya n'ụlọ ahịa a na-egwuri egwu buru ibu na etiti obodo Carrara. Mgbe ọ ka Federico na-eto eto were nzọụkwụ abụọ n’ime ụlọ ahịa ahụ, ihe mbụ ọ hụrụ bụ bọlbụ. Ozugbo, ọ gbara ọsọ gbagoro na ya, bulie ya ma gwa nna ya na oge eruola ka ha laa. Alberto chọrọ ka Federico leba anya na ihe egwuregwu ndị ọzọ, mana ọ jụrụ isi ọnwụ na ọ chọrọ naanị bọl bọl.
"N'ihi na ahụrụ m ihe m chọrọ" bọọlụ ", anaghị m ekwe ka ihe ọ bụla banye n'ụzọ m. Nke ahụ bụ agwa m Ma ọ bụ na m ga-ekwu, nke ahụ bụ akparamagwa nke ndị sitere na ezinụlọ m. Ndị mmadụ si Carrara siri ike dịka mabul - Iji nweta nkọwa ndị ọzọ, jụọ Gigi Buffon. "
Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunyere akụkọ eziokwu banyere Biography Nkụzi na ịrụ ọrụ
Ná mmalite nke ndụ ya, Federico mere nhọrọ kachasị nke chọrọ ịbụ onye egwuregwu ịgba ọsọ ọkachamara. Na mbu, enwere nsogbu di n’ime ya n’acho inweta akwukwo nke oma n’egwuregwu. Na mpaghara ebe Federico bi, na Obodo Oké Osimiri, e nweghị ọgbakọ dị mma nke ndị ntorobịa gburugburu. Laa azụ n'oge ahụ, otu kachasị mma na agbata obi ya, ASD Sporting Atletico Carrara ad igh i enye ha ihe nne na nna ya ch or o ka ya na ha bi obere oge.
Iji nweta ihe kacha mma maka nwa ha nwoke, nne na nna Federico Bernardeschi kwesịrị ime nhọrọ. Ma nne ya na nna ya kwetara na nwa ha nwoke ga-ahapụ ụlọ akwụkwọ n'oge 3: 15 pm (Nkeji nkeji 45 tupu klaasị ụlọ akwụkwọ kwụsịrị) iji nwee ụlọ akwụkwọ ọhụụ iji gaa gbaa bọọlụ.
Federico Bernardeschi Ndụ Ndụ Ahụike na Atletico Carrara. Ebe E Si Nweta: IG
Mgbe ọ dị afọ asatọ, Federico Bernardeschi malitere inweta agụmakwụkwọ football ya Polisportiva Ponzano, ebe a na - azụ ọdụ egwuregwu metụtara Empoli, ihe dị ka 70 kilomita site n'ụlọ ezinụlọ ya. Laa azụ n'oge ahụ, nne ya na-ekuru ya site na ụlọ akwụkwọ kwa ụbọchị tupu oge emechi, mee ya nri ehihie (ọ na-abụkarị pasta) wee chụpụ ya na-aga Empoli na isi awọ nke ezinụlọ Opel Vectra. Na-ekwu maka ahụmịhe kwa ụbọchị dịka ThePlayersTribune tinye ya, Federico Bernardeschi kwuru otu oge;
“Maka na amaara m na m na-anọ obere oge. Aga m ekechi akpụkpọ ụkwụ m n'ime ụgbọ ala. Mama m agaghị akwụsị akwụsị. M rute, m ga-adọkpụ gaa n'ọba iji rute n'ọzụzụ m. Mgbe awa abụọ gafere, ọzụzụ nke football ga-akwụsị, anyị laghachi azụ n'otu aka ahụ anyị siri bịa. ”
Ọbụna mgbe ọ lọtara site n’ụlọ akwụkwọ na-agwụ ike na ụbọchị egwuregwu, ndị nne na nna Federico Bernardeschi na ndị ezinụlọ ndị ọzọ maara na ọ bụ Edobere maka ihe dị ukwuu dịka ha ka ga na-ele ya ka ọ na-atụle ọrụ ndị ọ mụtara.
Ị maara?… Federico agaghị anọ n'ihe ndina ruo mgbe 10: 30 pm ma ọ bụ 11 pm kwa mgbede, mgbe ahụ ibili n'isi ụtụtụ iji mee ya ọzọ. Mkpebi dị otú ahụ na ịrụsi ọrụ ike mechara rụpụta ihe ya. Mgbe Federico Bernardeschi kpọrọ oku ịga Florentina, ịga nganga nke ndị òtù ezinụlọ niile (Onye mụ na ya nọ na njem m niile) enweghị oke.
Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunyere akụkọ eziokwu banyere Biography Ndụ Ndụ Mmalite
Ọnwụnwa gara nke ọma hụrụ Federico Bernerdeschi n'afọ 2003 (na afọ 9) iso ndi nkuzi akwukwo Fiorentina. Florence, obodo ebe klọb dị n'ime ya dịtụ aka n'akụkụ ọwụwa anyanwụ Empoli, n'otu ụzọ ahụ Federico na mama ya na-anya ụgbọ ala.
N'oge ọrụ ya, papa Federico Bernerdeschi ga-akpali m ime nke ọma karị, na-ewe iwe na ya maka ohere ọ bụla furu efu. N’ịchịkwa nrụgide nna ya kere, Federico kwuru otu oge;
“Mgbe ị bụ nwata, mgbe ụfọdụ ị na-eche ụdị ihe ahụ karịchaa mgbe nna na-ewe gị iwe ga-ewe gị oge ọ bụla ị na-etinyeghị ike gị.
Ma ka m na-etolite, m malitere ịghọta ihe nna m chọrọ karịa n’aka m n’ihi na ọ kweere n'ime m ”
Nrụgide nke nna ya mere ka obere Federico nwee mmetụta dị egwu na klọb ahụ ka ọ na-agbago n'usoro ndị ntorobịa, na-eme nke ọma na ndị iro ọ bụla na-abịa.
Federico Bernardeschi Oge mbu ya na Fiorentina. Ebe E Si Nweta Foto: IG
Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunyere akụkọ eziokwu banyere Biography Akpanwu akwukwo akuko
N'oge 16 dị afọ, Federico Bernardeschi onye na-agba bọọlụ kachasị mma nke ndụ ya na-emechi emechi na-eme ka ndị otu otu na Fiorentina pụta. Dịka ọ chere na ihe niile na ndụ ya na-aga were were, ihe nwute ahụ mere.
Ozi Njọ: Allbọchị ahụ bidoro ụbọchị ọjọọ Federico gara maka nyocha anụ ahụ. Ndị otu ahụike Florentina chọtara otu ihe, nke ha kwuru na ọ na-aga na-ezighi ezi n'ahụ ya na-akpali ha imekwu nyocha na Xrays. Bọchị ole na ole mgbe nke a gasịrị, dọkịta ahụ kọọrọ ndị nne na nna Federico Bernardeschi ihe ha hụrụ n'ime ahụ nwa ha nwoke.
“Nwa gị nwoke nwere obi sakwara mbara. Anyị amabeghị ụdị njọ ị bụ. Agbanyeghị, ọ ga - ekwe omume ọ gaghị enwe ike ịga n'ihu na ọrụ football ya. "
Dọkịta gwara ndị mụrụ ya. Dị ka a tụrụ anya, Federico enweghị ike ikwenye ya, n'eziokwu, ọ jụrụ ịnụ ya, na-eti mkpu .. "Mba… nke ahụ agaghị ekwe omume ”. O tinyere mgbalị dị ukwuu maka nne Federico mere ka ụkwụ bọọlụ ahụ nwere nsogbu dị jụụ.
A chọpụtara Federico Bernardeschi na Cardiomegaly nke pụtara Enugwuwanye Obi. Ebe E Si Nweta Foto: WebMD
Mgbe ha lechara ọnọdụ ahụ anya, ndị dọkịta mechara kpebie na Federico agaghị enwe ike ịgba bọl maka naanị ọnwa isii, akụkọ nke mere ka ezinụlọ Bernardeschi nwee ahụ iru ala. N'oge nchere ahụ, ọ nwara ijide onwe ya n'ọrụ n'ihe ọ kpọrọ ọnwa isii kachasị sie ike ná ndụ ya. Mgbe nyocha a na-apụghị ịgụta ọnụ, nleta ọkachamara na nzukọ, Federico mechara kpochapụ ka ọ maliteghachi ịgba bọl ya.
Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunyere akụkọ eziokwu banyere Biography Na-ewu ewu Akụkọ
Na 20 June 2014, Federico mere ụzọ banye na otu mbụ n'okpuru ntuziaka Vincenzo Montella. N'ihe na-erughị afọ atọ mgbe onye ọrụ aka izizi ya, (nke dị afọ 22), e nyefere Federico na-eto eto ka ọ bụrụ onyeisi ndị agha ekele ya ntozu okè, ịrụsi ọrụ ike, ezi ọnọdụ ọria ya na anya maka mgbaru ọsọ. Consideredbụ onye isi dị afọ 22 ka a na-ewere dị ka nwata dị ka ọnọdụ nke football wheretali ebe a na-elele ahụmịhe anya.
Oge ozo (2015 – 16), Bernardeschi bụ nyere ọnụ ọgụgụ uwe 10 dị ka nke Roberto Baggio mere na mbụ. N'otu oge ahụ, ọ nwetakwara aha ya “Brunelleschi”, mgbe ụlọ ọrụ ama ama ama ama ama. ekele ya na Usoro na ọfụma na pitch.
Bernardeschi jigoro akara iri- nke ahụ- nọmba ndị ama ama nke Roberto Baggio meriri na mbụ. Ebe E Si Nweta Foto: blackwhitereadallover
Dịka onye ndu pụrụ iche n'ọgba egwuregwu, e nyere Federico Bernardeschi onyinye AIAC Football Leader Under-21 Award. Ọganiihu akwụsịghị ebe ahụ, ọ ghọrọ onye ọzọ bụ onye Italiantali nke kwụ n'ahịrị maka European European Under-21 Championship Team nke mmeri egwuregwu. Nke a nwere anya ụfọdụ n'ime klọb kachasị na Europe.
Buru otu n'ime akụrụngwa kacha ewu ewu na football Italiantali dọtara ndị isi Fiorentina, Juventus bụ onye mere ya onye egwu kachasị elu kemgbe Baggio (na 1990) ịhapụ Florence isonye ha. Dị ka n'oge edere, Federico Bernardeschi enyerela ndị otu ya aka imeri ihe niile na Italian league bọọlụ bụ; Serie A, Coppa Italia na Supercoppa Italiana a ma ama.
Bilie na ịrị elu nke Federico Bernardeschi. Ebe E Si Nweta Foto: Pinterest, FootyAnalyst,
N'otu oge, nwatakịrị ahụ jụrụ ịhọrọ ihe egwuregwu ụmụaka ọzọ na-abụghị bọl nwere ugbu a diri ntuli aka nke meteoric rue onye ama ama N'anya anyị. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunyere akụkọ eziokwu banyere Biography Ndụ mmekọrịta
N'azụ nwoke ọ bụla nwere ihe ịga nke ọma, enwere nwanyị ijuanya na-atụgharị anya ya. N'okwu a nke Azzurri mba, enwere WAG mara mma nke mechara bụrụ enyi nwanyị. Ọ bụ onye ọzọ karịa onye mara mma nke Veronica Ciardi.
Zute Federico Bernardeschi Nwanyị nwanyị - Veronica Ciardi. Ebe E Si Nweta Foto: DropNews
Gettingmata Veronica Ciardi: A mụrụ nye ndị nne na nna ,tali, Veronica ghọrọ otu n'ime asọmpi kachasị amasị na 2009 versiontali nke Big Brother. N'oge ọ nọ na ngosi ihe nkiri ahụ, ọ malitere mmekọrịta na onye ọzọ na-asọ mpi aha ya bụ Sarah Nile. Mmekọrịta ahụ bụ nke kpatara asịrị na telivishọn Italiantali n'ihi na ọ bụ nke mbụ enyi nwanyi toshman akụkọ ịhụnanya ka aga-ezipụ na ihe ngosi akụkọ eziokwu Italiantali.
Federico Bernardeschi Nwanyị nwanyị - Veronica Ciardi na onye ọ hụrụ n'anya bụ Sarah Nile. Ebe E Si Nweta Foto: pinkmonster
Mmekọrịta Veronica na Sarah kwụsịrị na Septemba 2010 mgbe ọtụtụ nrụgide sitere n'aka ndị mgbasa ozi Italiantali. Federico Bernardeschi nke dị afọ itoolu karịa Veronica malitere ịlụ ya mgbe afọ ole na ole gasịrị ka ha nwechara ịhụnanya na nzukọ mbụ na Formentera.
Mgbe afọ abụọ dị ịtụnanya gbasara mmekọrịta nwoke na nwanyị, Bernardeschi bụ onye na-eleghị anya na nwanne ya nwoke nke okenye kpebiri na ọ ga-ewetara enyi ya nwanyị ihe ndị nta akụkọ saidtali kwuru, mere na ebe ndị mmadụ na-eme enyi.
Bernardeschi tụpụtara enyi ya nwanyị ka ya na mmadụ gbasịrị afọ abụọ. Ebe E Si Nweta Foto: forzaitalianfootball
Dika odi, ihe adighi nma maka di na nwunye dika ha kwuputara amicable split na mbido 2017. N’ikwu banyere ahụmịhe mmekọrịta ya na enyi nwanyị ya, Bernardeschi kwuru na nke a mere ka ọ tolite dịka mmadụ. Mgbe ọnwa ise nke nkewa ha na-adịghị mma, ndị enyi nwanyị mbụ Federico kpughere na nkewa na ya site na Instagram.
Afọ ole na ole ka nkewa ahụ gasịrị, nsogbu nke ndị hụrụbu n'anya abụọ bịara na njedebe ka ha laghachitere onwe ha, na-ezobe mmekọrịta ha na nzuzo ruo ọnwa. Na 28 nke August 2019, Veronica na Federico ghọrọ nne na nna.
Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunyere akụkọ eziokwu banyere Biography Ndụ nke Onye
Tomara ndu nke Federico Bernardeschi ga-achọ nyere gị aka inweta nkọwa ka mma banyere etu o si ebi ndụ ya na egwu.
N'ihi na enwere mabụ agba dị ọtụtụ na-acha ọcha gburugburu ya mgbe ọ na-etolite, Federico kwuru na marble ndị a ga-adaba mgbe ụfọdụ na nrọ ya na-akpụ onyo na isi ya mgbe ọ na-ehi ụra. Ihe omume a dị omimi malitere mgbe ọ dị afọ isii.
Tomata Federico Bernardeschi Life Life kwụsịrị ọgba egwu. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
Enweghi nkịta maka aja ya: Ndị egwuregwu bọọlụ ama ama, ya bụ C Ronaldo, Neymar, Sánchez wdg bụ ezigbo nkịta hụrụ ha n'anya. Ọbụna ị nwere okwu na ọ nweghị iguzosi ike n'ihe fọdụrụ na egwuregwu nke ugbu a, n'ezie ọ baghị n'uche mmekọrịta dị n'etiti Federico na nnukwu nkịta ya.
Federico Bernardeschi bụ otu n'ime ndị hụrụ nkịta buru ibu na-ahụ maka nkịta n'anya. Ebe e si nweta ya Instagram
Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunyere akụkọ eziokwu banyere Biography Ndụ Ezinụlọ
Akụkọ banyere ezinụlọ Bernardeshi kọwara na mbụ, na-akuzi ndị egwuregwu bọọlụ ka ha na-alụ ọgụ, ma na-achọ inweta oke n'ịkwere nke ahụ.bestzọ kachasị mma iji chee na enweghị olileanya bụ ibili site na mpaghara nkasi obi ha ma mee ihe dị iche'. Kama iso nna ya n'ime Okpu okwute gbara gburugburu, Federico emeela ezinụlọ ya niile ka ọ dị mpako ịhapụ ịhapụ ezinụlọ ya n'oge gara aga maka nnwere onwe ego, ekele maka football. Ugbu a, ka anyị nyekwuo gị nghọta banyere ndị òtù ezinụlọ ya.
Banyere Nna Federico Bernardeschi: Dị nnọọ ka ọtụtụ ndị nne na nna na 'Carrara'obodo Marble, Federico papa Alberto rụrụ ọrụ na ụlọ ọrụ Carrara Marble a na-agbari okwute ruo ọtụtụ afọ. Ọ bụ ụdị nna nke rụrụ ọrụ ruo ọtụtụ awa, na-ebili na 5 nke ụtụtụ, na-ahapụ ọrụ site na 6 am wee na-alaghachi n'ụlọ site na 6 pm Ọ ga-eburu ụzọ ụgbọ njem ọzọ ka ọ na-ahapụ isi awọ ya Opel Vectra maka nwunye ya na nwa ya nwoke ( Federico) iji rụọ ọrụ n ’ụlọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ na ebe a na-azụ football.
A na-ekele Alberto maka ịme ka nwa ya nwee ụbọchị mbụ ya na akara aka nke malitere site na oge ọ kpọgara ya n'ụlọ ahịa egwuregwu ebe ọ họọrọ bọl bọl mbụ ya. Ọzọkwa, ịkwanye ya ka ọ rụọ ọrụ nke ọma n'oge mmalite ọrụ nke akwụla ụgwọ.
Banyere mama Federico Bernardeschi: Aha gi amaghi aha ya dika edere ede. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ mgbasa ozi Italiantali nwere na mama mama Federico rụrụ ọrụ dị ka nọọsụ n'ụlọ ọgwụ adịghị nso n'ụlọ ezinụlọ ha. Ọ bụ aka siri ike na-ahụ n'anya, ma mgbe ụfọdụ na-efegharị ndị ọkụ iji tufuo nwa ya nwoke. Maka Federico, n'etiti ya na nna ya, enwere ezigbo nguzozi (Ndị egwuregwu Tribune akụkọ).
Banyere Federico Bernardeschi ụmụnne: Ọ dị ka o nweghị nwanne, mana Federico nwere nwanne nwanyị aha ya bụ Gaia Bernardeschi. A maara Gaia Inyere nwanne ya nwoke aka nke ọma ọ ga - egosi na ọ ga-enyocha ụdị omume ya.
Zute Nwanna Nwanyị Federico Bernardeschi - Gaia Berna. Ebe E Si Nweta Foto: Facebook
Ọ dọtara uche nke ndị Fans mgbe o mere post esemokwu banyere nwanne ya nwoke mgbe ọ gbusịrị egwuregwu megide Fiorentina ochie ya. Nwanne nwanyị Federico Bernardeschi kwuru otu oge;
Nwanne m nwoke, ezigbo nwanne nwee ike ịtụgharị Boos nke Fiorentina fans ka egwu. Gbara bọọlụ ụkwụ gị wee mechie ámá egwuregwu ahụ,… You're bụ nnukwu nwanne !!!. Ezigbo ndị ofufe Fiorentina, ana m emetere gị ebere, mana dịka oge niile, nwanne m nwoke gosipụtara ụdị nwoke na onye egwuregwu ọ bụ. Ugbu a, mmadụ niile agbachiri nkịtị, anyị na-anụkwa ụtọ nke a. ”
Okwu ndị a nke nwanne nwanyị Federico Bernardeschi Giana bụ Na 9 February 2018, mgbe nwanne ya nwoke natara mkparị sitere n'aka ndị egwuregwu n'ụlọ n'oge egwuregwu nke ọ gbụrụ bọọlụ na ọkara nke abụọ iji mechie igwe mmadụ ahụ.
Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunyere akụkọ eziokwu banyere Biography si ebi ndụ
A na-ahụkarị ụdị ndụ nke ndị kachasị elu bọọlụ site n'ụgbọelu nkeonwe, nnukwu ụlọ, na ihe ụtọ dị mfe. Federico, I bu ogwu ogwu ibi ndu buru ezigbo ibu karia inya ugbo ala di nfe, ihe nlere nke negosi ibi ndu ụgbo-ịnya.
Bernardeschi bụ ọgwụ iji gosipụta ụdị ibi ndụ dị egwu. Ebe E Si Nweta Foto: okomoko-ụlọ, okomoko ụlọ na Fiorentina IT
Ọbụlagodi na ebe obibi ya, Federico bi n'ụlọ ọgbara ọhụrụ nwere ihe osise nke enwe atọ, lampkeyde enwe na bọọlụ chess, onyinye sitere na nna ya nke si n'obodo nna ya Carrara.
Maka Federico, ọ bụghị ihe dị mfe maka ịnọrọ n'ụlọ, kama itinye ezumike na ebe oke osimiri mara mma.
Federico Bernardeschi na-eji ụfọdụ n'ime ego ya na ndị nwere Seaside Vacations. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunyere akụkọ eziokwu banyere Biography Eziokwu efu
Ozugbo tụkwasara nwa ojii: Federico Bernardeschi kwenyere na football dị mkpa, mana maka ya, ihe kachasị mkpa n'ụwa bụ 'ọrụ ebere'. N'ihi nke ahụ Federico ya na enyi ya nwanyị- Veronica Ciardi bụ ndị nnọchianya ukwu Zọpụta ụmụaka nzukọ na-abụghị nke gọọmentị. Nke a achọpụtala mgbanwe na ndụ nke nwa nwanyị mara mma nke yiri ka ọ na-elekọta ha.
Federico Bernardeschi na enyi nwanyị bụ ihe atụ dị ọcha nke ndị ọcha ọcha nwere ịhụnanya maka ụmụaka ojii. Ebe E Si Nweta: Instagram
Tattoo nke Federico Bernardeschi na-eweta ncheta nke enyi nwụrụ anwụ: E wezụga egbugbu egbugbere ọnụ nke Ave Maria, Federico nwere akara egbugbu nke uwe uwe enyi ochie nwụrụ anwụ. Izu ole na ole ka Davide Astori gabigasiri, o mere ka egbugbu ya kpuchie onu ya na ekpere ndi Katoliki.
Federico Bernardeschi toro Davide Astori site na igbu egbugbu nke ya. Ebe E Si Nweta Foto: ntughari na ThePlayersTribune
Okpukpe Federico Bernardeschi: Ndị mụrụ ya zụlitere ya onye Katọlik ma o nyefeela onwe ya kpamkpam na okpukperechi Ndị Kraịst. A na-ahụ ihe ngosi nke ike o nwere banyere Katọlik na ink tattoo Ave Maria na aka ya na foto ya na pope n'okpuru.
Kọwaa Okpukpe Federico Bernardeschi. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
Ozugbo iche maka United: Federico, mgbe ọ ka dị afọ iri na ụma bụ otu n’ime ndị nkà ha masịrị Sir Alex Ferguson. A hapụrụ onye isi bọọlụ mbụ nke Manchester United oge niile nke na ọchọrọ ịbịanye aka na 2011. Ị maara?… Emegaghị ịkwaga nkwagharị ahụ n'ihi na nna nna Federico mere ka o kweta ịnọ obodo ya nso.
Federico Bernardeschi Akụkọ nwata na gbakwunyere akụkọ eziokwu banyere Biography Video Nchịkọta
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ nwata anyị Federico Bernardeschi gbakwunyere Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi. Ọ bụrụ n’ịchọta ihe adịghị mma, biko kesaa ya nye anyị site na ịza ajụjụ n’okpuru. Anyị ga-eji echiche gị niile kwanyere ma kwanyere ùgwù ùgwù.